Abavelisi bempompo yelindle base China kunye nabathengisi | KAIQUAN
Ukuhamba: 10-4500m3 / h
Intloko: Ukuya kuthi ga kwi-54m 3. Ubushushu boTywala ＜ 80ºC ，
Ukuxinana kolwelo: ≤1 050 kg / m3
Inqanaba lolwelo akufuneki libe ngaphantsi kune: Isimboli "▽" eboniswe kumzobo wobungakanani bokufakwa.
Impompo ayinakusebenzisa ukuphatha ulwelo ngokubola okunamandla okanye amasuntswana aqinileyo.
Ububanzi bezinto eziqinileyo kulwelo abukho ngaphezulu kwama-80% obona buncinci bokuhamba kwesitishi sokumpompoza Ubude be-firber bolwelo kufuneka bube buncinci kunempompo yokukhutshwa kwempompo.
I-WL (7.5kw-) Uthotho lwePompo yokuGutyulwa kwelindle CN
I-WL (11kw +) Uthotho lwePompo yokuGutyulwa kwelindle ye-CN
Nkqo Amanzi Pump eziluncedo:
1. I-designe eyahlukileyo yokuhambisa imijelo ephindwe kabini, umzimba wempompo ebanzi, kulula ukudlula izinto eziqinileyo, ifayibha akukho lula ukuyifaka, eyona ilungele ukuthuthwa kwelindle.
2. Igumbi lokutywina lamkela uyilo lolwakhiwo olujikelezayo, olunokuthintela ukungcola kwelindle ukuba kungangeni kutywina lomatshini ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile; Kwangelo xesha, igumbi lokutywina lixhotyiswe ngesixhobo sevalve. Emva kokuba impompo iqalile, umoya kwigumbi lokutywina ungashenxiswa ukukhusela itywina loomatshini.
3. Impompo inesakhiwo esime nkqo, esihlala indawo encinci; Impeller ifakwe ngokuthe ngqo kwi-shaft ye-motor, ngaphandle kokudibanisa, impompo inobungakanani obufutshane ngokubanzi, isakhiwo esilula, kulula ukuyigcina; Ukucwangciswa kokuthwala okufanelekileyo, i-cantilever emfutshane emfutshane, ulungelelwaniso lwamandla e-axial, yenza ukuthwala kunye nokutywinwa komatshini kuthembeke ngakumbi, kwaye impompo iqhuba ngokutyibilikayo, ingxolo yokungcangcazela incinci.
4. Impompo ifakwe kwigumbi lempompo elomileyo ukuze kulondolozwe ngokulula.
5. Ngokweemfuno zabasebenzisi, inokuxhotyiswa ngekhabhathi yolawulo lombane kunye neswitshi yokutshintsha amanzi, engenakulawula ngokuzenzekelayo ukuqala nokumisa impompo ngokotshintsho lwenqanaba lolwelo, ngaphandle kolawulo olukhethekileyo , kodwa ikwaqinisekisa ukusebenza okukhuselekileyo nokuthembekileyo kwemoto, ekulungeleyo kakhulu ukuyisebenzisa.
Egqithileyo I-XBD yokuCima umlilo
Okulandelayo: Ukumba umpompo wokuhambisa amanzi amdaka Pump
Nkqo Pump Impompo yoGutyulo
Umzobo wePompo yeSectrum yePlanethi kunye neNgcaciso